BTK Üzerinden Avrupa'ya Ulaşacak İlk Yük Treni Sivas'tan Geçecek | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး58 SivasBTK မှတစ်ဆင့်ဥရောပသို့ရောက်ရှိမည့်ပထမ ဦး ဆုံးကုန်ပစ္စည်းရထားသည် Sivas မှဖြတ်သန်းလိမ့်မည်
16 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 58 Sivas, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
တရုတ်မီးရထား Express ကိုများအတွက်နိုဝင်ဘာလ5အတွက် Marmaray ရောက်ရှိဖို့ရန်စီစဉ်ထားကြသည်ကုန်တင်ရထားကိုကျော် (Titan ဖြစ်ပါတယ်) တရုတ်ကက်စပီယန်ကနိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း "Trans-ကက်စပီယန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း" ပေါ်တွင် အခြေခံ. တူရကီအတွက်ကြိုဆိုအခမ်းအနားကျင်းပပါလိမ့်မည်။ China Railway Express သည် Marmaray Tube Passage ကို အသုံးပြု၍ ဥရောပသို့ ဦး တည်သောပထမဆုံးကုန်တင်ရထားအဖြစ်သမိုင်းတွင်ဆင်းသွားမည်။ တူရကီနှင့်ကာဇက်စတန်တို့အကြားနှင့်ဘာကူ-Tbilisi-Kars (BTK) ၏အိတ်အတွင်းရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး volume ၏စီမံကိန်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတလိုင်းထဲကလုပ်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး၏ပြန်လည်ရှင်သန်ရေးရည်ရွယ်သည်။
အဆိုပါရထား၏ကျမ်းပိုဒ်၏အသေးစိတျ, ကာဇက်စတန်မီးရထား Inc ကို (ktz) တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ Pavel Sokolov သမ္မတဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားဒုဥက္ကဋ္ဌ (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးလီ Ihsan သင့်လျော်သောနှင့် TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager ခရီးစဉ် Kamuran ပရင်တာအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ တူရကီနိုင်ငံမီးရထားလမ်းအထွေထွေ ဦး စီးဌာန (TCDD) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အစည်းအဝေးတွင်ဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအပြင်ကုန်တင်ကုန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရထားလမ်းကဏ္countriesတွင်နှစ်နိုင်ငံရှိမီးရထားကုမ္ပဏီများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးများလာမှုတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းတရုတ်အကူးအပြောင်းနှင့်နိုင်ငံတကာကွန်တိန်နာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အတွက်ကုန်တင်ကုန်ချအဘို့ကိုယူစေခြင်းငှါအဆင့်တဆင့်တူရကီသို့ရောက်ကြ၏။
China Railway Express အတွက်ကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားကိုလည်းပြုလုပ်ရန်သဘောတူခဲ့သည်။5ကိုနို ၀ င်ဘာလအတွက်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည်။ အစည်းအဝေးကာလအတွင်း, တူရကီနဲ့ကာဇက်စတန်နှင့်ဘာကူ-Tbilisi-Kars (BTK) အကြားရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး volume ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတလိုင်းထဲကလုပ်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး၏ပြန်လည်ရှင်သန်ရေးတို့အတွက်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
Sivas ကုန်တင်ကားများ (ဗီဒီယို) ဥရောပတင်ပို့ပါလိမ့်မည် 12 / 08 / 2016 Sivas'tan Avrupa'ya yük vagonu ihraç edilecek :Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren TÜDEMSAŞ tarafından üretilen vagonların Avrupa'ya ihraç edileceği bildirildi. Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan,…
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကြှနျုပျတို့ကိုမှပင်လယ်ပေါ်မှာ Unye လိုင်းကေဘယ်လ်ကား 15 / 01 / 2015 Ünye teleferik hattı deniz üzerinden zirveye ulaşacak :Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu'da tarihe geçecek bir uygulamaya imza atmaya hazırlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu, Fatsa ve Ünye'de kıyı kenar…
ဓါတ်ရထားသည့် Mert မြစ်ကူးသွားပါလိမ့်မယ် 07 / 11 / 2015 ရထားလမ်းသည် Mert မြစ်ကိုဖြတ်သွားရလိမ့်မည်။ ဆမ်ဆန်၏အရှေ့ပိုင်းရှိTekkeköyခရိုင်အထိတိုးချဲ့ထားသောမီးရထားလမ်းသည် Mert မြစ်တံတားပေါ်ဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့်အမျှတံတားပေါ်တွင်ချဲ့ထွင်မှုလုပ်ငန်းများစတင်ခဲ့သည်။ Mert မြစ် Bridge'n
အသစ်အရူးစီမံကိန်းကိုသဘာဝတရားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုရထားလမ်းကူးသွားပါလိမ့်မယ် 12 / 08 / 2019 ဇူလိုင်လတွင် 10 အနေဖြင့် Kayseri-Nevsehir-Aksaray-Konya-Antalya မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်း၏နောက်ဆုံးပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း (EIA) အစီရင်ခံစာ၊4+ 607 ကီလိုမီတာလိုင်းတွင် 566 အစိတ်အပိုင်းများ၊ သဘာဝ၊ ဘဝ၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်ကီလိုမီတာတို့ပါ ၀ င်သည်။
တူရကီနိုင်ငံနယူးမျိုးဆက်အမျိုးသားကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး Wagon နှင့် BTK-ဥရောပရထား 18 / 01 / 2018 ထုတ်လုပ်မှုTÜDEMSAŞအတွက် "အမျိုးသားရထားစီမံကိန်း" တူရကီ, ဥရောပနှင့်ဘာကူ-Tbilisi-Kars မီးရထားလမ်းစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် Sggmrs-type အမျိုးအစားပလက်ဖောင်းကုန်တင်လှည်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ တူရကီနှင့်သြစတြီးယားအကြား operated ခံရဖို့တူရကီအလံနှင့်လှည်း၏ဖန်ဆင်းခြင်း ...
Sivas ကုန်တင်ကားများ (ဗီဒီယို) ဥရောပတင်ပို့ပါလိမ့်မည်
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကြှနျုပျတို့ကိုမှပင်လယ်ပေါ်မှာ Unye လိုင်းကေဘယ်လ်ကား
ဓါတ်ရထားသည့် Mert မြစ်ကူးသွားပါလိမ့်မယ်
တူရကီနိုင်ငံနယူးမျိုးဆက်အမျိုးသားကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး Wagon နှင့် BTK-ဥရောပရထား
အဆိုပါ Dardanelles တံတားဥရောပခုနှစ်တွင်ကြှနျုပျတို့ကို3နေ့မှပို့ကုန်ထုတ်ကုန်များပြီးစီးသည့်အခါ
Sivas ကမ္ဘာ့ဖလား Cargo Wagon ရောင်းချ